မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကချင် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်နေသည်။ ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုများကို တားဆီးထားခြင်း၊ လူသားဒိုင်းနှင့် မိုင်းရှင်း ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း၊ လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်မှုနှင့် လုယက်မှုများ – Burmese
You are here: Home / Blog / အရင်းအမြစ်များ / ကြေငြာချက်နှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ / မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကချင် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုမျ...
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်
ကချင် အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး- ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) မှ အရေးပေါ် အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်။
မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မှူးများက သူတို့ အနေဖြင့် သူတို့၏ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) အပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့သော မကြာသေးမီက ထိုးစစ်အတွင်း အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းပြောကြားချက်များနှင့် ခြားနားစွာပင် ကချင် အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး – ထိုင်းနိုင်ငံမှ စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်များနှင့် မေးမြန်းချက်များက ၂၀၁၈ ခု ဧပြီလအတွင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ် မြို့နယ် သုံးခုတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်က ရွာသားများအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ယင်းသုံးမြို့နယ်မှာ ဖားကန့်၊ တနိုင်းနှင့် အင်ဂျန်းယန် မြို့နယ်များ ဖြစ်သည်။ ယင်းကျူးလွန်မှုများတွင် ဒုက္ခသည်များကို ခိုလှုံမှု မရနိုင်ရန် တားဆီးခြင်း၊ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များကို စစ်ဆင်ရေးတွင် လူသားဒိုင်းနှင့် မိုင်းရှင်းကိရိယာများအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းနှင့် အရပ်သား ဧရိယာများကို ခွဲခြား ကန့်သတ်မှု မရှိပဲ လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်ခြင်း၊ လေကြောင်းမှ ဗုံးကျဲခြင်း၊ ပစ္စည်းများ လုယူခြင်းနှင့် ဖျက်စီးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
မေလ ၆ ရက် နှင့် ၇ ရက်နေ့များတွင် ဖားကန့်မြို့နယ် လိုင်နောင်ခူး ကျေးရွာမှ ကယ်ဆယ်ခဲ့သည့် ဒုက္ခသည်များက အလွန်ထိန့်လန့်ဖွယ် ကောင်းသော အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြခဲ့သည်။ ကလေး ၆၄ ဦး အပါအဝင် ဒုက္ခသည် ၁၅၂ ဦးတို့သည် တောများကို ဖြတ်၍ ထွက်ပြေးလာစဉ် မြန်မာ့တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၄၂၄ က သူတို့ကို တားဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူသားဒိုင်း နှင့် မိုင်းရှင်းကိရိယာများ အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ပြောပြကြသည်။ ဒုက္ခသည်များကို တလိုင်းတည်း လျောက်စေပြီး စစ်ကြောင်းမှကြားညှပ်လျောက်လာရာ ရှေ့တွင်လျောက်စေသော ရွာသားတစ်ဦး မှိုင်းထိခံခဲ့ရသည်။
စစ်တပ် အခြေစိုက် စခန်း အနီးတွင် လေးရက်ကြာ အတင်းအဓမ္မနေစေပြီးနောက်တွင် သူတို့အား မူရင်းရွာကို ပြန်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ရွာ ဘုရားကျောင်းတွင် ယာယီ စခန်း ဖွင့်၍ ၁၇ ရက်ကြာ နေခဲ့ကြရသည်။ ထိုကာလအတွင်း စစ်သားများသည် ရွာသားများ၏ အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး အစားအစာများနှင့် ပစ္စည်းများကို လုယူခြင်း၊ KIA ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ရှောင်ရှားရန် ရွာသားများ၏ အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ သူတို့အား ပြန်မလွှတ်မီတွင် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များကို မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်မှုမပြုကြ ရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အနောက်ဖက် ကီလို မီတာ ၂၀ဝ ခန့်အကွာအဝေးတွင်ရှိသော တနိုင်းဒေသဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ ၁၀၅ မမ အမြောက်များနှင့် အရပ်သား စစ်သား ခွဲခြားခြင်း မရှိပဲ ပြစ်ခတ်ပြီးနောက် လေယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် ယင်းဧရိယာကို ဗုံးကျဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် တနိုင်း မြို့နယ်၊ အောင်လော့ဒ် ရွာနှင့် အနီးဝန်းကျင်မှ အရပ်သား ၂၀ဝ၀ ခန့်သည် တောထဲသို့စတင် ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ လက်နက်ကြီးများကြောင့် အရပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သော လယ်သမားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ယင်း ဧရိယာကို တပ်ရင်း ၈၆၊ ၂၃၈၊ ၃၁၈ နှင့် ၁၀၁ မှ ရာနှင့်ချီသော စစ်သားများက သိမ်းပိုက်လိုက်သော အခါ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များသည် တောနက်အတွင်းမှ ဘေးကင်းရာသို့ ထွက်ခွာရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ တလကျော် တိမ်းရှောင်နေပြီးနောက်တွင် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်အုပ်စု အတော်များများကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သော် လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်မစွမ်းများပါသော ဒုက္ခသည်အယောက် ၁၃၀ ခန့်မှာ တောထဲ တွင် ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။
အင်ဂျန်းယန် မြို့နယ်အတွင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်မ ၃၃ နှင့် ၈၈ မှ ရာနှင့်ချီသော စစ်ကူများ ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည် ၆၀ဝ ခန့်ကို ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တောင်ပိုင်းမှ မြစ်ကြီးနားသို့ ထွက်ပြေးခြင်းကို တားဆီးခံခဲ့ကြရသည်။ သူတို့ကို အင်ဂျန်းယန်ရှိ ဘုရားကျောင်းတွင် အတင်းအဓမ္မ ခိုလှုံနေစေခဲ့သည်။ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လူထု ခေါင်းဆောင်များသည် ယင်းဒုက္ခသည်များ ဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ ထွက်ခွာနိုင်ရေး အတွက် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် ဆွေးနွေးနေရဆဲဖြစ်သည်။
ကချင် အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး- ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) သည် မြန်မာ့တပ်မတော်အား တိုင်းရင်းသား ဒေသအားလုံးရှိ သူတို့၏ ထိုးစစ်များကို ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် အရပ်သားများအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းများကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆီသို့ လှမ်းချီသော အားလုံး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်လာစေရန် တိုက်တွန်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်ဖြစ်ရာ ဒေသများရှိ အရပ်သားများကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို အရေးပေါ် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကချင် အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး- ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) သည် နိုင်ငံခြား အစိုးရများအား အောက်ပါတို့ကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
1. မြန်မာ့ တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအပေါ် ကျူးလွန်သော စစ်ရာဇ ဝတ်မှုများကို လူသိထင်ရှား ရှုတ်ချကြရန်
2. မြန်မာ့တပ်မတော်က ၎င်း၏ ထိုးစစ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းသည်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရံပုံငွေများကို ဆိုင်းငံ့ ထားရန်
3. မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အချင်းချင်း ပြုလုပ်နေသာ မည်သည့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုကို မဆို ရပ်ဆိုင်းရန်၊
4. မြန်မာအစိုးရက သူတို့၏ စစ်တပ်ကို သူတို့ကျူးလွန်သော စစ်ရာဇဝတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံမှု ရှိလာစေရန် လုပ်ဆောင်ပြီး တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအပေါ် စစ်ရေး အရထိုးစစ်များအားလုံးကို အဆုံးသတ်စေသည်အထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှု များကို ဆိုင်းငံ့ထားရန်
5. ပဋိပက္ခဖြစ်သောတိုင်းရင်းသားဒေသများရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ လူထုများထံ ထိရောက်စွာ ကူညီနိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သော လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများပေးရန်
May 15, 2018 /by ndb14
Tags: စစ်ရာဇ၀တ်မှု, လူ့အခွင့်အရေး
သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က... ကခ်င္ျပည္နယ္က တိုက္ပြဲျပႆ�...